ဒိတ်လုပ်ခြင်း၏ အကျိုးအမြတ်နှင့်အန္တရာယ်များ Lesson 7: Dating - the Benefits and Dangers
မိဘများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည် ဒိတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ချိန်၌ ဆယ်ကျော်သက်မလေးတဦးက ပင်တိုင်ဆွေးနွေးသူ Bill Gothard အား ဤသို့မေးခဲ့ သည်။ ““ဘယ်အသက်အရွယ် လောက် မှာ ဒိတ်စတင်လုပ်သင့်ပါလဲ..ရှင့်”” ထိုအခါ သူက ဤသို့ပြန်ဖြေသည်။ အောက်ပါအချက်တွေကို သေချာ သိထားရင် သမီး ဒိတ် စတင်လုပ်နိုင်ပါပြီ။””
၁။ ဒိတ်လုပ်ခြင်း၏ အကျိုးအမြတ်နှင့်အန္တရာယ်များကို နားလည်သဘောပေါက်သည့်အချိန်တွင်၊
၂။ ဒိတ်လုပ်ခြင်း၏ စံနှုန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျမ်းစာကပြောထားတာကို ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည် ပြီးသည့်အချိန်တွင်၊
၃။ မိမိ ဒိတ်လုပ်ထားသည့်သူကို ဆုံးရှုံးရမည်ဆိုတာတောင်မှ ထိုစံနှုန်းများကို မစွန့်ပယ်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အချိန်တွင်၊
ဒိတ်လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တဦးဦးနှင့် ချိန်းတွေ့ပြီး အတူတူ အချိန်ကို ကုန်ဆုံး စေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အုပ်စုလိုက် ဒိတ်လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ စုံတွဲအတော်များများ ချိန်းချက် တွေ့ဆုံကြခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ စုံတွဲ နှစ်တွဲသည် အတူတကွချိန်းတွေ့သွားလာခြင်းကို ““နှစ်တွဲချိန်းတွေ့ခြင်း”” ဟုခေါ် သည်။ အခြားသူများမပါဘဲ သင်တို့ နှစ်ဦးတည်း ချိန်းတွေ့မည်ဆိုပါက ““တစ်တွဲတည်း ချိန်းတွေ့ခြင်း””ဟု ခေါ်ပေမည်။
ပထမဆုံးအကြိမ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းများသည် အုပ်စုလိုက်ဒိတ်လုပ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေမည်။ အပျော်ခရီး ထွက်ခြင်းများ၊ ကျောင်းပွဲများနှင့် အသင်းတော်အစီအစဉ်များမှ သင်နှင့်ပထမဆုံးဒိတ်လုပ်မည့်သူကို စတင် တွေ့နိုင်သည်။ အုပ်စုလိုက် ဒိတ်လုပ်ခြင်း၏အားသာချက်မှာ သင်သည် ပို၍သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး စကားပြောဆိုခြင်းများကို သင်က ဦးဆောင်၍ ပြောသွားစရာမလိုပေ။ အုပ်စုလိုက်ချိန်းတွေ့သွားလာကြပြီး နောက် သာမန်အားဖြင့် အခြားစုံတွဲတစ်တွဲနှင့် သင်တို့စုံတွဲ အတူတူ သွားလာကြလိမ့်မည်။ သင်တို့စုံတွဲချည်း ချိန်းတွေ့ခြင်းသည် နောက်ပိုင်းမှဖြစ်သင့်သည်။ ငယ်ရွယ်သော ကောင်မလေး၏ ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့ခြင်းများသည် နှစ်ဦးတည်း ဒိတ်လုပ်ခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။
ဒိတ်လုပ်ခြင်းသည် သင်၏ပုဂ်္ဂိုလ်ရေးရာကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
သင်သည်အခြေအနေများကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်ရမည်ကို သင်ယူနိုင်ပြီး အခြားသူများနှင့် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံခြင်း အားဖြင့် သင်သည် မည်သို့ ရင့်ကျက် ကြီးထွား လာနိုင်မည်ကို သင်ယူနိုင်သည်။
လူမှုရေးအရ ပြေပြစ်အောင်ဆက်ဆံတတ်ရန် ဒိတ်လုပ်ခြင်းက သင့်ကိုကူညီပေးလိမ့်မည်။
ကောင်မလေး(သို့)ကောင်းလေးတဦး နှင့် စတင်တွေ့ဆုံချိန်၌ သင်သည် အနည်းငယ် ဟန်ပန်မကျ ဖြစ်နိုင်သော် လည်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် သက်တောင့်သက်သာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက် ဒိတ်လုပ်ခြင်းက သင့်ကို ကူညီ ပေး နိုင်မည်။
ချိန်းတွေ့ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် သင်၏ဘ၀အဖေါ်ကို ရှာတွေ့နိုင်သည်။
လူငယ်အများစုသည် တနေ့နေ့တွင် လက်ထပ် နိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြသည်။ ဒိတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏အနာဂတ် လက်တွဲဖော် ကို တွေ့ရှိလာနိုင်ရုံမက သင် လက်ထပ်လိုသည့် လူစားမျိုးကို ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒိတ်လုပ်ခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပြစ်မရှိသော်လည်း၊ ဒိတ်လုပ်ခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့် လူငယ် များစွာတို့သည် အပြစ်နွံအတွင်းသို့ ကျရောက်တက်ကြသည်။ ဒိတ်လုပ်ခြင်း၏အန္တရာယ်မှာ သင်သည် သင်၏အနာဂတ်ပျော်ရွှင်မှု့နှင့် သာယာအောင်မြင်သော အိမ်ထောင်ရေးကို ရနိုင်မည့်အခွင့်အရေးတို့အား များစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေမည့် အပြုအမူတို့ကို သင်သည် လုပ်မိနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်များက ဤသို့လွယ်ကူစွာ တွေးနိုင်သည်။ ““ငါရှေ့ဆက်ရမည့်ဘ၀ခရီး အရှည်ကြီး ရှိသေးတယ်။ ယခု ငါလုပ်တဲ့ရွေးချယ်မှု့ဟာ ငါ့ဘ၀အနာဂတ်ကို ထိခိုက်မှု့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။”” ထိခိုက်မှု့ ရှိပါတယ်။ သင်၏ဒိတ် လုပ်သည့် ပုံစံနှင့် သင်လုပ်သည့်အရာများသည် သင့်အနာဂတ်ဘ၀၏ အရည်အသွေး အပေါ်တွင် များစွာ အကျိုး သက်ရောက်မှု့ ရှိသည်။
ဒိတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်အချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
လူငယ်များစွာတို့သည် သဘောထားလေးနက်မှုမရှိဘဲ ဒိတ်လုပ်တတ်ကြသည်။ ထိုသို့ အလေ အနက်မထားဘဲ လုပ်ခြင်းကို Flirting လုပ်သည်ဟုခေါ်သည်။ Flirting လုပ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ သင့်ဘက်မှ အလေးအနက် ထားမှု မရှိဘဲ အခြားသူတဦးနှင့် အချစ်ဇာတ်လမ်း ဖန်တီးလိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တစ်ဦးဦးနှင့် အချစ် ဇာတ်လမ်း စတင်ခြင်းဆိုသည့် အိုင်ဒီယာသည် လူငယ်များစွာကို ရင်ခုန်စေသည်။ ဤသို့သောအချစ် ဇာတ်လမ်းသည် ယာယီ သာ ဖြစ်သည်ကိုလည်း လူငယ်တို့က နားလည် ထားကြသည်။ ဤသို့သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမျိုး၌ တဦး အပေါ် တဦး ဆပ်ကပ်အပ်နှံထားမှု မရှိပါ။ ကောင်းလေးရော ကောင်မလေးရောက သူတို့၏ ဆက်ဆံရေးကို မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို အကြောင်းပြချက် တစ်ခုခုပေး၍ အဆုံးသတ်နိုင်ကြောင်းကို နားလည်ထားကြသည်။
ဤသို့သော အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးက အန္တရာယ်မရှိဟုထင်ရသော်လည်း လူနှစ်ဦးသည် ချစ်ရေးချစ်ရာတို့နှင့် ပါဝင်ပတ်သတ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ သူတို့သည် တဦးကိုတဦး စိတ်ပိုင်းအရ ငြိတွယ်လာကြသည်။ တဦးအပေါ်တဦး ဆပ်ကပ် အပ်နှံထားမှုမရှိသော်လည်း၊ သူတို့နှစ်ဦးသည် စုံတွဲတစ်တွဲအနေဖြင့် မိမိတို့ ကိုယ်ကို မြင်လာကြမည်။ သူတို့၏ သူငယ်ချင်းများ က လည်း သူတို့ကို တပူးတွဲတွဲမြင်ကြပြီး စုံတွဲတစ်တွဲ အနေဖြင့် မှတ်ယူကြမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တဦးကိုတဦး ငြိတွယ်လာပြီး သူတို့၏နှလုံးသားတို့သည် လည်း ကပ်ညိလာမည်ဖြစ်သည်။
ဤစုံတွဲသည် ကွဲပြဲသွားသောအခါ တခုနှင့်တခု ကပ်ညိလျှက်ရှိသော နှလုံးသားနှစ်ခုသည်လည်း ဆွဲဆုတ်ခံလိုက် ရသလို ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စိတ်ဒဏ်ရာရသွားကြပြီး တဘ၀လုံးစာ အမာရွတ်များ ကျန်ရစ်ခဲ့နိုင်သည်။ နှစ်ဦးလုံး (သို့) တဦးသည် ငြင်းပယ်ခံရသောခံစားချက်မျိုးကို ခံစားရပြီး မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးသောစိတ်သည်လည်း ဆုံးရှုံး သွားနိုင်ပေသည်။
အသဲခွဲခံရခြင်းသည် ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ အမှန်မှာ ကြေကွဲဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။ လူငယ်အချို့သည် သူတို့၏စိတ်ကို မာစေခြင်းအားဖြင့် ဤကိစ္စကို ကိုင်တွယ်တတ်ကြသည်။ သူတို့က ““ဒါကအေးဆေးပါ။ နောက် တစ် ယောက် ထပ်ရှာတာပေါ့””။
ချစ်ရေးချစ်ရာ၌ ကျရှုံးခဲ့ရာမှ ပြန်လည်ဦးမော့လာအောင် ကြိုးစားနေသူသည် အလွန်ထိခိုက်လွယ်သည်။ သူတို့ ချစ်ခဲ့သောသူ၏ ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရသောခံစားချက်မျိုးသည် အလွန်ဆိုးဝါးသည်။ မကြာခဏပင်၊ သူတို့သည် သူတို့ အပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားသောသူတဦးဦးကို အသည်းအသန် ရှာနေလေ့ရှိ ကြသည်။ သူတို့သည် သတိထားခြင်း မရှိတော့ပဲ နောက်ထပ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုအတွင်းသို့ အလျင်အမြန်ခုန်ဝင်တက်ကြပြီး ဤဆက်ဆံရေးက အရင်က ဆက်ဆံရေး ထက် ပိုဆိုးနေတတ်သည်။
ဒိတ်လုပ်ခြင်းသည် ခန္ဓာပိုင်းအရ နီးကပ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ကို ရူးသွပ်နေသော ယဉ်ကျေးမှုက ချစ်ရေးချစ်ရာတစ်ခု၌ အရေးအကြီးဆုံးမှာ လိင်ဖြစ်သည်ဟု ထင်စေလေ့ရှိသည်။ ခန္ဓာပိုင်းအရ ဆက်ဆံရေးကို အချစ်စစ်နှင့် မှားယွင်းတတ်ကြပြီး စုံတွဲတို့သည် ကမန်းကတန်း လက်ထပ် တတ်ကြသည်။
လိင်ပိုင်းအရပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းသည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို အများအားဖြင့် ပျက်စီးပစ်သည်။ ပိရမစ် ကို သတိရပါရဲ့လား? လိင်အပေါ်တွင် အခြေတည်သော အိမ်ထောင်ရေး (သို့)အချစ်ဇာတ် လမ်းသည် ကြာရှည် ခံမည် မဟုတ်ပါ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု အဆုံးသတ်သွားခြင်းသည် နာကျင်ဖွယ် ကောင်းသည်။ အကယ်၍ ဤဇာတ်လမ်း ထဲမှ စုံတွဲသည် လိင်ပိုင်းအရ ရောယှက်ခဲ့ပါက သူတို့၏ကွဲကွာခြင်းသည် ဆယ်ဆ ပိုဆိုးပေလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အနီးကပ်ဆုံး ပုံစံမျိုးဖြင့် ဆက်နွယ်ခဲ့ပြီး သင်တို့၏ တစိတ်တပိုင်းကို တဦးကိုတဦးပေးခဲ့ကြပြီး ထိုအရာကို ပြန်မရနိုင်တော့ပါ။
ဒိတ်လုပ်ခြင်းသည် ရန်လိုမုန်းတီးစိတ်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မနာလိုမှုများနှင့် ရန်လိုမုန်းတီးမှုများသည် ကွဲပြဲသွားသော ယောက်ျား၊ မိန်းမများအကြားနှင့် သူတို့၏ရည်စား အသစ်များအကြားတွင် အချိန်အတန်ကြာ ဖြစ်တည်လာနိုင်သည်။ သူတို့၏အတွေးမှာ ““သူက ငါ့ကောင်လေး (သို့) ကောင်မလေးကို ခိုးသွားတယ်””ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော မုန်းတီးမှုများ သည် လူငယ်ခရစ်ယာန် အုပ်စုတစ်ခုကို ကွဲပြားစေနိုင်သည်။
ဒိတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အရှုပ်ထုပ်အချို့ကို သင့်အိမ်ထောင်ရေးဘ၀အတွင်းသို့ သယ်ဆောင်မိလိမ့် မည်။
သင်က သင်လူပျို (သို့)အပျိုဘ၀၌ ရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ထိုအရှုပ်ထုပ်တို့ကို နောက်မှာချန် ထား၍ အိမ်ထောင်ရေးဘ၀ကို စတင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်လိမ့်မည်။ မှားသောတွေးခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့ သို့သော ခန္ဓာပိုင်းအရ ဆက်နွယ်ခဲမှုအားလုံးတို့သည် ““စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှုပ်ထုပ်များ””ဖြစ်လာပြီး အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဒိတ်လုပ်ခြင်းသည် ဟန်ဆောင်မှုဖြင့်ပြည့်နှက်သော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
လူတဦးစီက အခြားသူတဦးအား အထင်ကြီးစေရန် အကြီးအကျယ်ကြိုးပမ်းကြသည်။ လူတဦးစီ တိုင်းသည် အခြားသူတဦးက သူတို့ကို အကောင်းဘက်ကချည်းမြင်အောင် ကြိုးစားကြပြီး မိမိတို့၏ အားနည်းချက်များကို ဖုံးကွယ် ထားကြသည်။ ထို့ကြောင့် တဦး၏ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို အခြားတဦးက မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ရန်မှာ အလွန် ခက်ခဲ့သည်။
မည်သူမဆိုသည် မိမိတို့၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်အစစ်အမှန်ကို ခဏတာသာ ဖုံးဖွယ်ထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ စုံတွဲ တစ်တွဲသည် တဦးကိုတဦး သေချာမသိဘဲ နှစ်အနည်းငယ် တွဲနေနိုင်သည်။ ထို့နောက် လက်ထပ် ပြီးမှ သူတို့၏ လက်ထပ် လိုက်သောသူသည် မည်သို့သောသူဖြစ်သည်ကို သိလာကြသည်။ သူတို့က ““သူ(သို့)သူမဟာ အဲဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုတာကို မသိခဲ့ဘူး။””
လူငယ်ခရစ်ယာန်အများစုကို လက်ထပ်စေရန်နှင့် ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီ အသက်ရှင်သော ရင်သွေး များ ကို ပြုစုပျိုးထောင်စေရန်မှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောအချိန်၌ ဘုရားသခင်က ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်အပေါ်တွင် သူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကို နှိုးဆွပေးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် အဓိကမေးခွန်းမှာ ““ကျွန်ုပ်အတွက် ဘုရား သခင် စိတ်ထဲမှာ ကြံစည်ထားတဲ့သူကို ဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်မလဲ? ဒိတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးအမြတ်အချို့ကို ရနိုင် သော်လည်း၊ ဒိတ်လုပ်ခြင်းအများစု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ““ရရန်””သာဖြစ်ပြီး ““ပေးရန်””မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် မှားယွင်း သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သော အခြေခံထားပြီး သင်သွားနိုင်သမျှသွား ဆိုသည့် မှားယွင်းသောပန်းတိုင်လည်းရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် မှားသောရလဒ်များ ဖြစ်သော အသဲကွဲခြင်းများနှင့် စိတ်ပိုင်းအရ ပျက်စီးခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယနေ့ကာလ ယဉ်ကျေးမှု၌ ဆယ်ကျော်သက်များသည် တယောက်နှင့်ကွဲသွားလိုက်၊ နောက် တယောက်နှင့် တွဲလိုက်၊ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်နေသည်မှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ပါ။ အကြိမ်တိုင်းတွင် ပြီး ခဲ့သည့်တကြိမ်၌ ရခဲ့သော နာကျင်မှုသည် တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ၊ နောက်တဦးနှင့် အချစ်ဇာတ်လမ်းစရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ နက်ရှိုင်းစွာချစ်ကြိုက်လိုက်၊ ကွဲပြဲလိုက်ဖြစ်နေပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ ချစ်လိုက်၊ ကွဲလိုက်လုပ်နေသည့်ပုံစံသည် ကွာရှင်မှု အတွက် အစမ်းလေ့ကျင့်ထားသလို ဖြစ်နေသည်။ ၄င်းနှင့်မတူ ကွဲပြားသောနည်းလမ်းရှိပါသလား? ရှိပါတယ်။ ဤအရာကို Courtship (အလေးအနက်ထား၍ပိုးပန်းခြင်း) ဟုခေါ်သည်။
Courtship ဆိုသည်မှာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းဆက်ဆံရေးအတွင်း၌ ကောင်းလေးနှင့် ကောင်မလေး နှစ်ဦးစလုံးတွင် တူညီသော ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များ ရှိကြသည်။ ဤသို့သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားသခင် ရွေးချယ်ထားပေးသောသူနှင့် လက်ထပ် နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Courtship ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်မှာ ကောင်လေးနှင့် ကောင်မလေးနှစ်ဦးစလုံးက သတ်မှတ်ထား သော စည်းမျဉ်းအချို့ကို သစ္စာရှိရှိ လိုက်နာရ မည်။
ပထမဆုံးစည်းမျဉ်းမှာ တစ်ဘ၀လုံးတွင် တဦးတည်းနှင့်သာ ပေါင်းဖက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် ဟိုရှုပ်ဒီရှုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ဤသို့ဖြင့် ကောင်လေးနှင့် ကောင်မလေး နှစ်ဦးသည် တဦးကိုတဦး အပြန် အလှန် သိနားလည်နိုင်ရန်အတွက် ဆန္ဒပြင်းပြစွာ ကြိုစားကြမည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် တည်ဆောက်မည့် သူတို့၏ အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း ဘုရားသခင်က သဘောတူလား၊ မတူ လားဆိုတာကို လေ့လာရှာဖွေကြမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယစည်းမျဉ်းမှာ ရမ္မက်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ရမ္မက်စိတ်တွင် အရယူလိုသော သဘောသဘာဝ ရှိသည်။ ဤစိတ်က သူ့အားချက်ချင်း ကျေနပ်စေရန် တောင်းဆိုသည်။ စစ်မှန်သော အချစ်မှာမူ မှန်ကန်သောအချိန်နှင့် အနေ အထား ကို စောင့်လိမ့်မည်။ ဆပ်ကပ်အပ်နှံမှုရှိသော ခရစ်ယာန်နှစ်ဦးသည် လက်မထပ်မီ လက်တွဲသည်မှလွဲ၍ ခန္ဓာပိုင်း အရ ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ကြဉ်ကြသည်မှာ အထူးအဆန်း မဟုတ်ပါ။ အပျော်ရွှင်ဆုံး လက်ထပ်ထားသော သူများအထဲမှ အချို့က သူတို့၏ပထမဆုံးအနမ်းမှာ လက်ထပ်ပွဲကျင်းပရာ စင့်မြင့်ပေါ်၌ဖြစ်သည်ဟု သက်သေခံကြသည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ရှိ မိဘများအား ရိုသေလေးစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် စီမံ ပေး သော Courtship တွင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ရှိ မိဘများ၏သဘောတူမှုကို ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ သင်တို့၏ ဆက်ဆံရေးကို နှစ်ဦး နှစ်ဘက် မိဘများက သဘောမတူပါက ဤအချက်သည် လျစ်လျှူမရှုသင့်သည့် အန္တရယ် အချက်ပြမှု တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
စတုတ္ထစည်းမျဉ်းမှာ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀အတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမနှစ်ဦး စလုံးက အလေးအနက်ပြင်ဆင်ထားမှသာ အောင်မြင်သောအိမ်ထောင်တစ်ခုအား တည်ဆောက် နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးအရလွတ်လပ်မှုရှိခြင်းကိုလည်း ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်တစ်ခုတွင် လို အပ်သည်။ ဤစုံတွဲသည် ဘက်ဂျက် တစ်ခု ထားရန်အလေးအနက်စဉ်းစားသင့်သည်။ သင်တို့သည် တဦးကို တဦး အရူးအမူးချစ်ကြသော်လည်း၊ သင်တို့သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ တစ်ခုခုကိုမတတ်ဘဲ၊ ဘဏ္ဍာရေးအရ လွတ်လပ်မှုလည်းမရှိပါက Courtship စတင်ရန် အသင့် မဖြစ်သေးပါ။
ယောက်ျားနှင့်ဇနီးနှစ်ဦးစလုံးသည် ယေရှုကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်၍ ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုရှိသော ခရစ်ယာန်များ ဖြစ်ပါက အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ တဦးက လုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံမှုကိုရှိသော ခရစ်ယာန် ဖြစ်ပြီး အခြားတဦးက ဘုရားသခင်၏အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ့ပျက်ပျက်သဘောထားပါက ပြသနာ ကြီးများဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းကို ခံပြီးသောခရစ်ယာန်တဦးသည် မယုံကြည်သူ တဦးနှင့် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို လက်မထပ်သင့်ပါ။
Courtship (အလေးအနက်ထား၍ပိုးပန်းခြင်း) အကျိုးကျေးဇူးများ
Courtship (အလေးအနက်ထား၍ ပိုးပန်းခြင်း) သည် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် ဆက်ဆံရာ၌ လွတ်လပ်မှု ရှိစေသည်။ သင်သည် တဦးတည်းအပေါ်တွင်သာ အာရုံထားပြီး သင်တွေ့သမျှယောက်ျား(သို့) မိန်းမများအပေါ်တွင် စိတ်မ၀င်စားတော့ပါ။ ဤသို့သောပိုးပန်းခြင်းသည် မနာလိုဝန်တိုမှုများအား ကင်းစင် စေသည်။ Courtship သည် မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို မြင့်မားစေသည်။ တာဝန်သိစိတ်ကို မြင့်မားစေသောကြောင့် သင်သည် သင့်ဘ၀အတွက် အလေးအနက်ထား၍ ပြင်ဆင်စီမံ နေမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ဘာပြောသနည်း? ဘုရားသခင်သည် သူ့သားသမီးများ၏ ပျော်ရွှင်မှု၌ ၀မ်းမြောက်သည်။ ကျွနုုပ်တို့သည် အပြည့်အ၀ ၀မ်းမြောက်နိုင်ရန် အတွက် ပညတ်တော်တခုစီကို ပေးထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပညတ်တော်တစ်ခုစီတိုင်းက ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် ထားသောမေတ္တာနှင့် အကြံအစည်ကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်အတွက် စီမံထားသော အကောင်း ဆုံးအရာ ကို ရလိုပါက ကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသော ဒိတ်လုပ်ရန်စံနှုန်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရမည် ဖြစ်သည်။
လိင်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်က ဘာပြောထားသည် လေ့လာကြပါစို့။
လက်မထပ်ရသေးသောသူနှစ်ဦး လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို မတရားသောမေထုန်မှီဝဲခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဟူမူကား၊ သင်တို့သည် မတရားသောမေထုန်ကို ကြဉ်ရှောင်၍ သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ၎င်း၊” ၁ သက် ၄း၃ ဟု ဆိုသည်။ လိင်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘုရားသခင်၏ သားသမီး တိုင်းကို ပြောထားသည်မှာ ““မတရားသော မေထုန်ကို ကြဉ်ရှောင်ရန်မှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်” ဖြစ် သည်။
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်အားလုံးကို မုန်းတီးသည်။ သို့သော် သူသည် မတရားသောမေထုန်၌ မှီဝဲ ခြင်းဆိုသည့် အပြစ်ကို အထူးမုန်းတီးသည်။ ကျမ်းစာက ““မတရားသောမေထုန်ကို ကြဉ်ရှောင်ကြလော့။.... မတရားသောမေထုန်ကို ပြုသောသူမူကား၊ မိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မှား၏။””ဟုဆိုသည်။ ၁ကော ၆း၁၈ ဘုရား သခင်က ဤအပြစ်မုန်းတီးရခြင်းမှာ ဤအပြစ်က သင့်အတွက် သူကြံစည်ထားသောလှပသည့် အစီအစဉ် ကို ဖျက်ဆီးပစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍သင်သည် ခရစ်ယာန်တဦးဖြစ်ပါက၊ သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော် ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာသည် ဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသော သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်း ကို ၄င်း၊ မိမိတို့ကိုယ်ကို မိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်း မသိကြသလော။ သင်တို့ သည် အဘိုးနှင့်ဝယ်သောသူ ဖြစ်သော ကြောင့် ....ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ထင်ရှားစေကြလော့။”” ဟုဆိုသည်။ ၁ကော ၆း၁၉,၂၀။
ကျမ်းစာက ““သင်တို့သည် သန့်ရှင်းခြင်း၊ အသေရေတင့်တယ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းတက်စေ ခြင်းငှာ၎င်း၊ အမှုအရာတို့ကို လွန်ကျူး၍ ညီအစ်ကိုကို ပရိယာယ်အားဖြင့် မပြစ်မှားစေခြင်းငှာ၎င်း....””ဟု ဆိုသည်။
လိမ်ညာဖြားယောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ သင်သည် အမှန်တကယ် မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘဲ အခြားသူ တဦး၏မျှော်မှန်း ချက်တို့ကို မြင့်တက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၌ လိမ်ညာဖြားယောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ကလိန်ကျခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ်ရမည်ဟု လိမ်ညာကာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခု၌ ရင်းနှီးမြုပ်နှံစေခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
ယောက်ျားတဦးသည် ကောင်းမလေးနှင့် လိင်ဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက် သူမအားချစ်သည်ဟု ဟန်ဆောင် ပြောဆိုပြီး တနေ့တွင် လက်ထပ်မည်ဟု လိမ်ညာပြောခြင်းသည် လိမ်ညာဖြားယောင်းနေခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ဘုရားသခင်သည် ဤအပြစ်ကို သေချာမှတ်သားပြီး ဤသို့သောအရာများကို လုပ်သောသူတို့ကို စီရင်သောသူဖြစ်သည်ဟု ပြောထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအပြစ်ကို ကျူးလွန်သော သူများကို ဘုရားသခင်က အပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းကလေးနှစ်ဦးစလုံးအတွက် စည်းမျဉ်းကောင်းတစ်ခုမှာ တနေ့တွင် အခြားသူတဦးက တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မည့်အရာတစ်ခုကို ပေးလည်းမပေးပါနှင့်။ ယူလည်းမယူပါနှင့်။
ဘုရားသခင်က လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ ကျမ်းစာက ““မိန်းမနှင့်ပေါင်းဘော် သကဲ့သို့ ယောက်ျားချင်း မပေါင်းဘော်ရ။ ရွံရှာဖွယ်သောမှုဖြစ်၏”။ ၀တ်ပြုရာကျမ်း ၁၈း၂၂ ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် လိင်တူ ဆက်ဆံသူများကို မမုန်းပါ။ အမှန်မှာ သူတို့ကိုချစ်သည်။ သူတို့ကို အလွန်ချစ်သောကြောင့် သူတို့အတွက် အသေခံရန် သူ့သားတော်ကိုပင် စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်က သူတို့၏အပြစ် များကို မုန်းတီးသည်။ သူက ဤအပြစ်သည် သူ့အတွက် ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကျမ်းစာက ဘုရားသခင်သည် သောဒုံမြို့နှင့် ဂေါမောရမြို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းမှာ သူတို့၏အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်စု ဆိုသည်။
ခရစ်ယာန်တဦးက မယုံကြည်သူတဦးကို လက်ထပ်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။ ဤအပြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်က မတိမကျ သတိမပေးထားပါ။ ““မယုံ ကြည်သောသူတို့နှင့်တွဲတတ်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ထမ်းဘိုးကို မထမ်းကြနှင့်။ (၂ကော ၆း၁၄)ဟု ဆိုသည်။
ဤအချက်သည် သင့်စိတ်ထဲတွင် စွဲနေပါစေ။ မယုံကြည်သူတဦးကို လက်ထပ်ရန်မှာ ဘုရားသခင် ၏အလိုတော် ဘယ်တော့မှ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ မှန်သောအချိန်နှင့်လူကို စောင့်ပါ။
သုတေသနပြုသူတဦးသည် ၄ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များ၏ အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူသည် ဤနည်းလမ်းကို ဤသို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သူသည် သခွားသီးတစ်လုံးနှင့် ခုံတစ်ခုံမှလွဲ၍ အခြား ဘာမှမရှိသော အခန်းငယ်တစ်ခုအတွင်းသို့ ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးများအား တဦးပြီးတဦး ၀င်စေသည်။ ထို့နောက် သူက ““ကဲ ကလေး သင် ဒီ သခွားသီးကို ယခုချက်ချင်းယူပြီး စားချင်ရင် စားလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာ ကိစ္စ အချို့ လုပ် ပြီး သည့်အထိ စောင့်ပါက၊ ဆရာပြန် လာတဲ့အခါ၊ သခွားမွှေးသီး၂ လုံးစားရမယ်”” ဟုပြောပြီး သူဟာ ထွက်သွားခဲ့သည်။
ထိုနောက် သူသည် အပြင်ဘက်မှနေ၍ သခွားမွှေးသီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကလေးငယ်တဦးစီ၏ ပြုမူ မှုကို အပေါက် လေး တစ်ပေါက်မှ ကြည့်ခဲ့သည်။ အချို့ကလေးများသည် သူထွက်သွားသည် နှင့်တပြိုင်နက် သခွားမွှေးသီးကို ယူစား ကြသည်။ အချို့မှာမူ မိနစ်အနည်းငယ်သာစောင့်နိုင်ပြီး အချို့မှာမူ စိတ်ပိုင်းဖြတ်၍ စောင့်ကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ မျက်စိကို လက်ဖြင့်အုပ်ထားပြီး ဂိမ်းကစားရန်၊ သီချင်းဆိုရန် နှင့် အိပ်ပျော်သွားရန်ပင် ကြိုးပမ်းကြသည်။ သုတေသန ပညာရှင်သည် ပြန်ရောက်လာ သောအခါ သူတို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရယူခဲ့ရသော သခွါးမွှေးသီး ၂လုံးကို ဤကလေးများအား ပေးခဲ့သည်။
ဤမျှနှင့် ဤအဖြစ်အပျက် အဆုံးမသတ်သွားပါ။ ဤကလေးများသည် အထက်တန်းကျောင်းသို့ ရောက်သော အခါ၊ ဒုတိယမြောက် သခွားမွှေးသီးကိုရရန်အတွက် စောင့်ဆိုင်းခဲ့သောကလေးများသည် အစောပိုင်းကတည်းက သွေးဆောင်မှုကို အရှုံးပေးခဲ့သောကလေးများထက် ပို၍စေ့စပ်သေချာ၊ လူကြိုက် များ၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပြီး မှီခိုနိုင်သော ဆယ်ကျော်သက်များဖြစ်လာကြသည်ကို ပညာရှင်က တွေ့ရှိခဲ့သည်။
လူ့လောက က ““သင်ရနိုင်သမျှ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ယခုချက်ချင်းအရယူပါ။ ဒါဟာ ဘ၀ပဲ“” ဟု ပြောသည်။ ဘုရားသခင်က ““သင်သည် မှန်သောလူ၊ မှန်သောအချိန်နှင် မှန်ကန်သော အနေအထားတို့ကို စောင့်ပါက၊ ““သခွားမွှေး””ကို နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ၀မ်းမြောက်စွာစားနိုင်သည်”” ဟုပြောသည်။
လူသားကို ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားသောကြောင့် တိရစ္ဆာန်များနှင့် မတူ ကွဲပြား သည်။ ဘုရားသခင်သည် တပါးတည်းသေား ဘုရားဖြစ်ပြီး ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်တို့ဖြင့် ပေါင်းဖွဲ့ထားသော သုံးပါးသောတစ်ဆူဘုရားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း အပိုင်း ၃ ပိုင်းအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ယင်းတို့မှာ ခန္ဓာ၊ စိတ်နှင့် ၀ိညာဉ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ယခုဘ၀တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ရာ အိမ် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးမှာ စိတ်ခံစားချက်များ၊ အလိုဆန္ဒနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ိညာဉ်မှာ အတွင်းပိုင်းအကျဆုံး တွင် ရှိသောအရာဖြစ်ပြီး ဤ၀ိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် သိကျွမ်းနိုင်စွမ်း ရှိပြီး သူ့၏ အသက် ကို လက်ခံရ ယူနိုင်သည်။
အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်မှာ ဘုရားသခင်အား စိတ်နှလုံးအကြွင်း မဲ့ချစ်ကြ သော ယောက်ျားနှင့် မိန်းကလေးကို အတူတကွဆုံးဆည်းစေရန်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအပေါ်တွင် ထားသောသူတို့ နှစ်ဦးလုံး၏ မေတ္တာကို အခြေပြု၍သူတို့သည် နက်ရှိုင်းသော ၅၂၈ မေတ္တာကို တည် ဆောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ဖြစ်လာနိုင်သောအိမ်ထောင်ရေးဘ၀နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ရှာဖွေသည်နှင့်အမျှ သူတို့၏ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည် Courtship (အလေးနက်ထား၍ပိုးပန်းခြင်း)အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
Courtship ဆက်ဆံရေးအတွင်း၌ သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အချင်းချင်းလည်း သာ၍ နီးကပ်လာမည်။ လက်ထပ်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော် ပိုင်းခြားသိမြင်လာသောအခါ၊ သူတို့သည် စေ့စပ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌ လက်ထပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့နှစ်ဦး၏ ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်များ တလုံးတ၀တည်း ဖြစ်သွားခြင်း ၌ ၀မ်းမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်၌ တလုံးတ၀တည်း ဖြစ်လာကြသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် သူတို့သည် ဤဘ၀တွင် လူနှစ်ဦးရနိုင်သော အနက်ရှိုင်းဆုံး၊ အပျော်ရွှင်ဆုံးနှင့် ကျေနပ် နှစ်သိမ့်မှု အပေးဆုံး အိမ်ထောင်ရေးကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးကို ပြုံး၍ကြည့်နေပြီး ““ဒါဟာငါ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာ””ပဲဟု ပြောမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှ အရေးကြီးသောစံနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁) ကျွန်ုပ်သည် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀အတွက်သာ လိင်ကိုသီးသန့်ဖယ်ထားမည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်နှင့်ဒိတ်လုပ်ထားသောသူများကို ဆုံးရှုံးရမည်ဆိုတာတောင်မှ မတရားသော မေထုန်၌ မှီဝဲခြင်းဆိုသည့် အပြစ်ကိုမကျူးလွန်ပါ။ လိုအပ်လာလျှင် ကျွန်ုပ်နှင့်ဒိတ်လုပ်သူအား ဤသို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောမည်။ ““တနေ့ကျလျှင် ကျွန်ုပ်သည် လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး အဲဒီအချိန်ကျမှ ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ လိင်ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ ပါဝင်လာမှာပါ။ အဲဒီအချိန်ထိ ကျွန်ုပ်စောင့် ချင်တယ်””။
(၂) “ NO ”ဟုပြောတက်ရန် ကျွန်ုပ်သင်ယူမည်။
သင်သည် သင်မလုပ်သင့်သည့်အရာများကို လုပ်ရန်အတွက် သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိသော လောကီအမှုများ၌ ပျော်မွေ့နေသူများသည် အခြားသူများကိုလည်း သူတို့အဆင့်သို့ရောက် အောင်ဆွဲချလိုကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆင်ခြေဆင်လက်သာပေးနေပါက၊ သူတို့သည် သင့်နောက် မှထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်လိမ့်မည်။ သင်သာ ဤသို့ကျက်သရေရှိစွာ၊ ငြင်သာစွာပြောပါက၊ သူတို့သည် သင့်ကို အားနာ ပေးလိမ့်မည်။ ““သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်ုပ်၏သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် လုပ်ဖို့ သင့်တော်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး””။
(၃) အပျို (သို့) လူပျိုအနေဖြင့် ကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာနေနိုင်ရန်သင်ယူမည်။
အမှန်စင်စစ်၊ ကျွန်ုပ်သည် အပျို (သို့) လူပျိုဘ၀၌ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမရှိပါက၊ အိမ်ထောင် ကျပြီးသော လူတဦးအနေဖြင့်လည်း ကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
(၄) ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကို စောင့်ထိန်းမည်။
ကျွန်ုပ်သည် မှားသောလူအမျိုးအစားနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်အားအလွန်ချစ် သောကြောင့် သူနှင့် ကောင်းကင်ဘုံ၌ အတူနေနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်အတွက် သွေးစွန်းသောကားတိုင်ပေါ်၌ အသေ ခံခဲ့သည့်သူအား ကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလုံးကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူရွေးချယ်ပေးမည့်သူကိုသာ စောင့်မည်။
(၅) ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်ယာန်များကိုသာ ဒိတ်လုပ်မည်။
မယုံကြည်သူတဦးကို လက်ထပ်ရန်မှာ သူ၏အလိုတော်မဟုတ်ပါဟု ဘုရားသခင်က အတိအကျ မပြောထားပါ။ ကျွန်ုပ်သည် မယုံကြည်သူများနှင့် ဒိတ်မလုပ်ပါက၊ မယုံကြည်သူတဦးနှင့် လက်ထပ်မိ လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
(၆) ကျွန်ုပ်သည် Courtship (အလေးအနက်ထား၍ပိုးပန်းခြင်း) ကိုအလေးထားပါမည်။
လက်ထပ်ရန်အတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါက ကျွန်ုပ်သည် ပြသနာများစွာဖြစ်စေနိုင်သော ပေါ့ ပျက်ပျက် ချစ်ရေးချစ်ရာကိစ္စများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ပေါ့ပျက်ပျက်သဘော ထားမျိုးဖြင့် ပိုးပန်းခြင်းကို ရှောင်ရှားပြီး ဒိတ်လုပ်ခြင်းကစားပွဲ၌ ၀င်မကစားပါ။ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်မှုနှင့် တာဝန် သိ စိတ်ကို မြင့်မားစေသော Courtship ကိုသာ အလေး အနက်ထားပါမည်။
(၇) ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်ကို ဘုရားသခင်၏လက်ထဲ၌အပ်ထားပါမည်။
ဤသို့လုပ်ခြင်းက စွန့်စားရာရောက်သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း၊ ကျမ်းစာက ““ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ကိုးစားလော့။ ကိုယ်ဥာဏ်ကိုအမှီမပြုနှင့်။ သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကို မျက်မှောက်ပြုလော့။ သို့ပြုလျင် သင်၏လမ်းခရီးတို့ကို ပဲ့ပြင်တော်မူမည်”” ဟုဆိုထားသည်။ သု ၃း၅,၆။
သူ့ကို မယုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏မေတ္တာ၊ ယုံကြည်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ရရန် အတွက် သူသည် အရာအားလုံးကို မလုပ်ခဲ့သလော? ဘုရားသခင်က ““ငါသည် သင်တို့ကိုအကျိုးနည်း စေခြင်းငှာ၊ ကြံစည်သော အကြံ မဟုတ်ဘဲ သင်တို့သည် မြော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်း၊ ငြိမ်ဝပ် စေခြင်းငှာသာ သင်တို့အဘို့ ကြံစည်သော အကြံတို့ကိုငါသိ၏“”ဟုဆိုသည်။ ယေရမိ ၂၉း၁၁
(၈) ကျွန်ုပ်၏ဘ၀အတွက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဝန်ခံမည်။
လူငယ်များသည် သူတို့၏ဘ၀နှင့်အနာဂတ်ပျော်ရွှင်မှုကို မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်နှင့် လိင်အပေါ် တွင်ဘာကြောင့် အခြေပြုထားသနည်း? အကြောင်းမှာ သူတို့သည် ပျင်းရိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့် ဘ၀ကို ငြီးငွေ့ နေသနည်း? အကြောင်းမှာ သူတို့သည် မိမိအတွင်း၌ မိမိ ပိတ်မိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ဇာတိပကတိ စိတ်သည် သူတို့ဘ၀၏အလယ်ဗဟို၌ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပျင်းရိသောသူများအဖြစ် မဖန်ဆင်း ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်း၍ ကြွယ်ဝသော အသက်တာကို ရနိုင်ရန်အတွက် သူသားတော်ကို စွန့်လွှတ် ပူဇော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက ““...ငါမူ ကား သိုးတို့သည် အသက်နှင့်လွတ်ရုံသာမ၊ အထူးသဖြင့် အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်း (abundant life) ငှာ လာသနည်း””။ ဟုဆိုသည်။ ယော ၁၀း၁၀
ဘုရားသခင်ထံ၌ ကျွန်ုပ်ဘ၀အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ သူသာအလိုတော်ရှိပါက မှန်ကန်သော အချိန်၌ သင့်တော်သောသူကို ကျွန်ုပ်ဘ၀အတွင်းသို့ သူသည် ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦး လုံးအတွက် သူ၏ အလိုတော် ကို ပြီးမြောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ သူသတ်မှတ်ထားသော အချိန်၌ ဤအရာကို သူလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ယုံပါမည်။
အခြားသူတဦးက တနေ့နေ့တွင် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မည့်အရာကို ပေးလည်းမပေးပါနှင့်။ ယူလည်း မယူပါနှင့်။ အခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးအား သင်ကိုယ်တိုင်းလည်း မလုပ်ပါနှင့်။ John နှင့် Mark သည် ကောလိပ်တွင် အခန်းဖော်များ ဖြစ်ကြသည်။ John ၏အတိတ်ဘ၀တွင် ပြင်းထန်းသည် အမှားများရှိခဲ့ သော်လည်း၊ သူအနာဂတ်တွင် အလေးအနက် ထား၍ နမ်းမည့်သူမှာ သူ့ဇနီးသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကြုံးဝါး ထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် John သည် Maryanne ကို စတင် ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ညစဉ်ညတိုင်း John သည် ချိန်းတွေ့ရာမှ ပြန်လာသောအခါ Mark သည် သူ့ဒိတ်အကြောင်းကို သူ့အား ဤသို့ မေးခွန်းထုတ်လေ့ရှိသည်။ ““အခြေအနေဘယ်လိုလဲ၊ ကိုယ့်လူ”” “မင်းဘာရခဲ့သလဲ”။ John က ““ Mark ၊ ငါ အဲဒီလို ပုံစံမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး၊ Maryanne ကိုလေးစားလွန်းတဲ့အတွက် သူမကို ဟိုဟာဒီဟာ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူး””ဟု အမြဲတမ်း ပြန်ဖြေလေ့ရှိသည်။
တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက် John နှင့် Maryanne တို့ကွဲသွားခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် Maryanne ကို ဘယ်သူက ဒိတ်လုပ်လဲဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ Mark ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ချစ်ကျွမ်းဝင် သွားကြပြီးနောက် နောက်ဆုံးတွင် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ John သည် သူတို့၏ မင်္ဂလာပွဲတွင် သတို့သား အရံဖြစ်သည်။ ထို့နောက် John သည် Mark ကို လူဆိတ်ညံရာနေရာသို့ ဆွဲခေါ် သွားပြီး Mark အား ဤသို့တိုးတိုးလေးပြောခဲ့သည်။ ““ Mark ရေ ငါ Maryanne ကိုငါဒိတ်လုပ်နေတုံးက၊ သူမ နှင့် လိင်ပိုင်းအရ မပတ်သက်ခြင်းကို မင်းကထောက်ခံခဲ့တာကို မှတ်မိသေးလား? ထိုအခါ Mark က မင်း အဲ့ဒီလိုမပတ်သက်ခဲ့တာနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ငါမင်းကို ဘယ်လောက် ကျေးဇူးတင်လဲ ဆိုတာကို မင်းမသိနိုင် ပါဘူး”” ဟု ပြန်ဖြေသည်။ ““ငါ သူမကို အဲ့ဒီလို ရိုးရိုးသားသား ဆက်ဆံခဲ့တာကို မင်း ၀မ်းမသာ ဘူးဘား?”” ဟု John က ထပ်မေးလိုက်သည်။“” ထိုအခါ Mark သည် မျက်ရည်တွေမကျအောင် မနည်းထိန်းလိုက်ပြီး ““အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငါမင်းကို ဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင် လေးစားလဲဆိုတာကို မင်းသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ကွာ“” ဟုဖြေလိုက်သည်။
၁။ ဒိတ်လုပ်ခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပြစ်မရှိသော်လည်း၊ ဒိတ်လုပ်ခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့် လူငယ် များစွာတို့သည် အပြစ်နွံအတွင်းသို့ကျရောက်တတ်ကြသည်။
၂။ သင်ဒိတ်လုပ်သည့်ပုံစံနှင့် ချိန်းတွေ့ချိန်၌ သင်လုပ်သောအရာများသည် သင်၏အနာဂတ်ဘ၀ အပေါ်တွင် များစွာ အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
၃။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တဦးဦးနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ကင်းမဲ့ပြီး အသဲခွဲခံရခြင်းသည် လည်း အသေး အမွှား ပြသနာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
၄။ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ကွဲပြဲသွားခြင်းသည် နာကျင်ဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော် ဇာတ်လမ်းအတွင်း ရှိ စုံတွဲသည် လိင်ပိုင်းအရပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါက သူတို့အတွက် ဆယ်ဆပို၍နာကျင်ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။
၅။ ခရစ်ယာန်လူငယ်အများစုအား လက်ထပ်စေလိုပြီး ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ မိမိတို့၏ ရင်သွေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်စေရန်မှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဖြစ်သည်။
၆။ Courtship (အလေးအနက်ထားရန် ပိုးပန်းခြင်း) ဆိုသည်မှာ ဤသို့သော်ဆက်ဆံရေးအတွင်း၌ ကောင်းလေ၊ ကောင်မလေး နှစ်ဦးစလုံးတွင် အိမ်ထောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လေးနက်သော သဘောထားများ နှင့် ရေရှည် စီမံကိန်းများ ရှိသည်။
၇။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်အားလုံးကို မုန်းတီးသည်။ သို့သော် သူသည်မတရားသော မေထုန်၌ မှီဝဲ ခြင်းဆိုသည့် အပြစ်ကိုအထူးတလည် မုန်းတီးရခြင်းမှာ သင်တို့နှစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ သူ၏လှပသော အကြံအစည်ကို ဤအပြစ်က ဖျက်ဆီး ပစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၈။ အချို့သော အထူး အခြေအနေများ၌ ခရစ်ယာန်တယောက်သည် မယုံကြည်သူတစ်ဦးနှင့်လက်ထပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဖြစ်သည်။
၉။ သင်သည် ဘုရားသခင်ကြံစည်ထားသော အကောင်းဆုံးအရာကို ရယူလိုပါက သင်၏စံနှုန်းများ အား ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ထံမှ လေ့လာရယူပါ။
၁၀။ သင်သည် သခင်ယေရှုအား သင့်ဘ၀၏ အရေးကြီးဆုံးအရာအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပါက၊ သင့်အား ပျော်ရွှင် ကျေနပ်မှုအများဆုံး ပေးမည့်အရာကို ရွေးချယ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။